#Siyaasi Shaaciyey In dhaqaalo Ku Bixinayaan Dawlado Shiisheeye Mudaharaad ka dhan ah Dawladda - Get Latest News From Horn of Africa
#Siyaasi Shaaciyey In dhaqaalo Ku Bixinayaan Dawlado Shiisheeye Mudaharaad ka dhan ah Dawladda
By axadle On Apr 17, 2019
Siyaasi Salaad Cali Jeelle oo ah lataliyaha madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay banaanbaxyo uu sheegay inay abaabulayaan kooxaha mucaaradka ku ah dowladda Soomaaliya.
Salaad Cali Jeelle,ayaa ku eedeeyay siyaasiyiin uu kamid yahay Cumar C/rashiid oo ra’iisul wasaare labo jeer kasoo noqday dalka, inuu ka dambeeyo abaabulka banaanbaxyada ka dhanka ah dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Wuxuu sheegay in xisbiyada Mucaaradka ay dhaqaalo ka helayaan dowlado shisheeye kuwaasi kasoo horjeeda nidaamka dowladeed ee dalka, islamarkaana ay hadda abaabulayaan banaanbaxyo ka dhan ah dowladda.
Dowladda Imaaraatka Carabta ayuu eedeynta ugu badan u jeediyay wuxuuna sheegay inay bixinayaan dhaqaalo loo qeybinayo dadka barakacayaasha ah si ay banaanbax kaga dhigaan magaalada Muqdisho.
“Imaaraadka Carabta ayaa dhaqaale ku bixinaya waxyaabaha ka dhanka ah jiritaanka dowladda, Cumar C/rashiid ayaa ka mid ah oo Senator ka tirsan Aqalka Sare oo ku nool Imaaraadka”ayuu yiri Cumar C/rashiid.
“Waxaa la abaabulayaa banaan bax ka dhan ah dowladda Soomaaliya oo ay qaban qaabinayaan mucaaradka iyo Xisbiyo halkaan fadhiya, waxaa banaan baxa la rabaa in lagu wiiqo jiritaanka umadda iyo dowladnimada, waxaa ognahay in dad u adeegaya dowlado shisheeye ayaa banaan baxan wada”ayuu hadalkiisa kusii daray.
Siyaasi Salaad Cali Jeelle oo saaxiib dhow la ah madaxda dalka ayaa kamid ah siyaasiyiin difaaca dowladda Madaxweyne Farmaajo marka dadka shacabka ah ku mucaaradaan waxqabad la’aanta dowladda.
5 hours ago 36,995